HomeWararka CiyaarahaBorussia Dortmund oo u aragta Anthony Martial badalka Erling Braut Haaland
September 25, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Borussia Dortmund ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqdo Manchester United weeraryahankeeda Anthony Martial xagaaga soo socda, iyadoo kooxda ka dhisan Bundesliga uu ka tagayo Braut Haaland .
Qandaraaska Haaland ee lagu burburin karo £ 67m ayaa noqon doona mid shaqeynaya sanadka soo socda, xiddiga heerka caalami ee dalka Norway ayaana si weyn loo filayaa inuu u dhaqaaqo, iyadoo Man United ay ka mid tahay dhowr kooxood oo ku loolamaya saxiixiisa.
Sida laga soo xigtay 90min , BVB ayaa durba isu diyaarineysa bixitaanka 21 jirka waxayna u aqoonsatay Martial inuu yahay bedelka suurtagalka ah ee weerarka dhexe.
kooxda ka dhisan dalka Jarmalka ayaa sidoo kale xiiseynaya Timo Werner , laakiin weeraryahanka Man United ayaa loo arkaa fursad dheeraad ah oo la awoodi karo in 2022.
Martial ayaa ku guuldareystay inuu shabaqa soo taabto lix kulan oo uu u saftay kooxda Ole Gunnar Solskjaer xilli ciyaareedkaan wuxuuna ku guuldareystay inuu ka faa’ideysto fursadii uu wacdaro ka dhigay kulankii West Ham United ee EFL Cup habeenkii arbacada.
25 jirkaan, oo Old Trafford uga soo dhaqaaqay Monaco bishii September 2015, ayaa weli waxaa u harsan saddex sano qandaraaska uu kula jiro kooxda 20-ka jeer haysata horyaalka Ingiriiska.